Luka Modrić oo ka hadlay ujeedkiisa ugu weyn xiligan ee kubada cagta – Gool FM
Luka Modrić oo ka hadlay ujeedkiisa ugu weyn xiligan ee kubada cagta
(Real Madri) 27 Dis 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Luka Modrić ayaa xaqiijiyay in rajadiisa ugu weyn ay tahay in kubada cagta uu ku soo gaba gabeeyo garoonka Santiago Bernabéu.
Dhinaca kale Luka Modrić ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii diray in sida lagu gaari lahaa arintan loo baahan yahay inuu bixiyo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican ee kubada cagta.
Modrić ayaa sanadka 2018 wuxuu u ahaa sanad cajiib ah, kadib markii uu ku guuleystay abaal marino badan ay ka mid ahaayeen laacibka ugu fiican yurub, FIFA the Best iyo abaal marinta Ballon d’Or 2018.
Luka Modrić oo ka qeyb galay xaflad ka dhacday dalkiisa hooyo Croatia ee abaal marino lagu gudoon siinayay shaqsiyaadka ugu fiican ciyaaraha ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta:
“Rajo weyn ayaan ku qabaa inaan mustaqbalkeyga ku soo gabagabeeyo kooxda Real Madrid”.
“Ujeedkeyga shaqsiyadeed iyo rajadeyda ugu weyn ayaa ah in kubada cagta aan ku soo xiro kooxda Real Madrid, taasi waa sheekada ugu fiican”.
“Laakiin si aan u gaaro waa inaan awoodaa inaan ku ciuaaro qaab ciyaareekeyga ugu fiican, sidaas darteed ma noqon doonto arin sahlan”.
“Waxay dad badan ii sheegern inay fiican tahay in aan ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah kadib koobka aduunka 2018, laakiin qalbigeyga ayaa wuxuu ii sheegay inaan sii ciyaaro, waana sii wadi doonaa inaan u ciyaaro inta ay iyagu u baahan yihiin adeegeyga”.
"Xitaa Daafac dhexe waan ka ciyaari karaa.".
SHEEKO WAALAN: Maxamed Saalax oo Liverpool ugu GOODIYAY inuu ka tagi doono haddii ay la soo saxiixdaan Laacibkan...(SABABTA ka dambeysa oo ka Farxisay MUSLIMIIN badan)